Apple inogadzirisazve webhusaiti Apple Music yeVatambi | Ndinobva mac
Vakomana paApple vangogadziridza vhezheni yewebhu peji Apple Music yeVanyori, webhusaiti uko maartist anogona kuwana zvese zvavanoda kutsikisa nziyo paApple Music, vanoona mari yavanowana kubva kuzvinyorwa, uko nziyo dzawo dzinogadzirwa ...
Sekureva kwekambani iyi, webhusaiti nyowani ndiyo "imba yepakati" nyowani yevanyori kuti vawane maturusi neruzivo rwekuti vagadzirire sei mimhanzi yavo padandemutande reApple. Nekugadziriswazve kwewebhusaiti ino, Apple inotaura nezve yayo nyowani sevhisi Apple Music Lossless uye Dolby Atmos.
Nekuburitswa kuri kuuya kweApple Music Kusarasika, webhusaiti inogadziriswazve ine rumwe ruzivo nezve nziyo muDolby Atmos uye sei maartist angatore mukana wese weiyi tekinoroji.
Dolby Atmos inokodzera mune yako yaunofarira yekugadzira maturusi, kungava sepulagi-mukati kana kuburikidza nekubatanidzwa kwazvino. Nekwaniso yekutarisa pane masipika kana ako mahedhifoni aunofarira, idzi mhinduro dzenji dzinokubatsira kuvhura mikana mitsva nerusununguko rwekugadzira, kungave mu studio, kumba kana kuenda. Dolby Atmos Production Suite inosanganisirwa nyore nyore kuenda kunhamba inotungamira yeDigital Audio Workstations (DAWs), kusanganisira Logic Pro.
Kubudikidza neyatsva Gadzira tebhu, maartist anogona kuwana matipi anobatsira ekuti ungashandisa sei Apple zvishandiso nemapurogiramu kunyora rwiyo, kunyanya iyo app. memos ezwi ,, GarageBand uye Logic Pro nemapulagi echitatu-bato.
Kubva kuApple ivo vanokurudzira maartist kuti gadzira ako emimhanzi mavhidhiyo neFinal Cut Pro uye akasimudzira mavhidhiyo ake matsva kuburikidza neApplication application.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inogadzirisazve Apple Music yeVanyori webhusaiti
Evernote anowedzera mabasa kune ako akakurumbira manotsi nekudaro achiwedzera kugadzirwa
27 "Kutaridzika kwekuratidzira kwakawedzerwa kune 'vintage' runyorwa